Anyanisi - isitshalo, ngaphandle okuyinto ke awusakwazi ukwenza noma senkosikazi eyodwa. Namuhla sizokubonisa indlela yokutshala anyanisi ezinhle, ngoba, cishe, akukho izitsha ezifana ezazingathandi Ungeze lokhu yemifino emangalisayo. Sidla ke nsukuzonke futhi inqwaba. Ngakho-ke, kuzo zonke nomkhaya badinga eningi anyanisi. Abanye abantu bakhetha ukuthenga ngomumo eyenziwe, futhi othile efuna bebodwa, ne engadini yaso.
Njenganoma yimuphi omunye kwezitshalo, anyanisi zidinga ukunakekelwa nokuhlonipha imithetho kokwehla. Uma ungazi indlela yokutshala anyanisi ezinhle, sizokubonisa. Kunezindlela eziningana:
imbewu (ikhumini elimnyama);
Ngeke ukhulume ngamunye wabo, kodwa labo azokhulisa ezinhle kuphela anyanisi nezimpaphe.
Ukutshala Onion ubusika
Kuyinto le ndlela uma unakekelwa kahle inika yi ephelele. Ngo imvelo, ukuze uthole isivuno enempilo anyanisi, sebenzisa Seva. It zingatshalwa imbewu, kodwa kuphela abamba ukushisa, ngoba isitshalo sakho ngaphandle angase angabi naso isikhathi sokupheka ukuvuthwa ngaphambi kubanda. Ngakho, ngaphambi kokuba ikhule anyanisi Seva we ebusika, khetha indawo umhlaba. Lokhu isiko uthanda loam non-esidi. Indawo ezifanele kakhulu embhedeni, lapho ngaphambili likhule amazambane, utamatisi noma ukhukhamba. Ngaphambi betshala esiphatha ngayo umhlaba necebo zethusi sulfate. Seva kumele kube ezincane, kungekho umonakalo, shiya phakathi kwazo cishe 5 cm. Ukutshala is okungcono kwenziwe ekuqaleni kuka-October. Thela phezu Peat noma sawdust. Musa uzisole, sypte kungaphezu. Entwasahlobo ka ngokucophelela ususe ungqimba phezulu ukuvumela umnsalo wakho imicibisholo.
Imifino zalesi sitshalo iyasiza. Jabulela kungenzeka hhayi kuphela ehlobo kodwa ebusika. Indlela sikhule ngo-anyanisi esibayeni? Kulula kabi. Ukuqala imbewu Thenga. Ngo greenhouse ungakwazi uhlwanyele kubo ngo-Okthoba, futhi kuleyo nsimu kusukela April. Uma ufuna ngokushesha uthole anyanisi oluhlaza, khona-ke adala ifilimu ekupheleni kukaMashi. Ukumba up umbhede imbali, ukususa ukhula futhi zalisa namaminerali. Ungakhohlwa mayelana amanzi, njengoba onion akawuthandi emi amanzi. Umbhede kumele kahle ezimboziwe kwemijondolo. Imbewu kungaba pre-ziqhume indlu (kodwa hhayi ngempela). Seeding imali imigqa, ngokugcina ibanga elibahlukanisile 20 cm Musa ukuhlwanyela lishonile kunesikhumba 4 cm Lapho nje amahlumela - .. Ukuze izimpaphe mncane. Zalisa ne-nitrogen eningi umquba anyanisi kuqala, bese phosphate kanye potassium.
Indlela yokutshala anyanisi ezinhle? Nakekela kubo! Lesi sitshalo linesizotha, kodwa namanje ukunakekelwa esiyinhloko imithetho udinga ukulandela. okungukuthi:
inhlabathi okuxekethile njalo;
umquba ulusizo aguqe, kodwa kumele yenziwe yini eminyakeni eminingi ngaphambili kuka ezimbili ngaphambi kokutshala;
umswakama ngokweqile kuyalimaza, Nokho ukuchelela kuphela uma kunesidingo (amanzi afudumele);
kokufika endaweni, khetha libalele futhi evulekile;
hhayi emuva kwesikhathi izinsuku ukutshala (ngokuvamisile umnsalo ukugqashuka kanye amaqabunga birch ziqala benu bukhule ekuseni);
esikhundleni potassium kungcono ukusebenzisa umlotha (e izimali);
ukuvunwa Kwenziwa kuphela uma izimpaphe eyomile, futhi ilanga lizophuma.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi konke mayelana indlela yokutshala anyanisi ezinhle. Sifisela wena isivuno ocebile futhi impilo ezinhle!
"Enterofuril" uma kwenzeka ubuthi: incazelo, yokusetshenziswa